Maka onyeọrụahụ、ana-ejikọkarịemail nandịisidịmkpadịkaGoogle maọbụYahoo ebeọbụn’efu naọfọrọnke nta kaọbụrụnaọdịghịiheọbụlagbasara nchekwa.
Otúọdị、ụlọahịana-enwekarịihedịiche iche achọrọ、ọbụkwaihedịmmaịchọrọilebanye anya na oziịntanetịemail.
Ọbụezie na e nwerensụgharịnsụgharịdịnaọtụtụụlọọrụntanetị、ọtụtụụlọọrụna-erite uru na mgbanwe na ike nkeọrụメール。メールna-emekarịka ozi-ena-elekọtasite na ihe nkesa na-ezigara maọbụraara onwe ya nye.
サーバー間-$ 5.00 /月
– $ 0.99 /月
– マリテナ$ 0.80 /月
– マライトナ$ 3.99 /月
– マライトナ$ 2.95 /月
– マライトナ$ 2.96 /月
Ntuzi nkuzi site nankwụsị
Ngosipụta：WHSR nataraụgwọntugharịsite naụlọọrụụlọọrụemailndịakpọtụrụaha na ibe a。 Echiche na nkwenyeanyịdabeere na ezigboahụmịheọrụna dataahịa.
Tupu m abanye n’ime ebe a kaanyịtụleeisi ihendịmbụ.
1.1 Gịnịmere ga ga-ejichọọメールメール?
1.1.2 2- Ncheデータ
1.2 Gịnịna-eme ezigboメールボーフム?
2 Ebee kaỊghachiteAkaụntụAkaụntụGị?
Ọbụezie naọbụghịisiokwu na njedebe nkeọnụọgụgụireụtọnke ireụtọ、isi ihenchịkọtaazụmahịankeazụmahịaabụghịihe mgbagwoju anya。メールBochumbụn’ezie okwuna-enweghịatụnananịna-egosi iheọrụna-akwado oziịntanetịgị。 Dịkaọmụmaatụ、Gmail nwere ike weeredịka ozi-e.
Otúọdị、n’imeakụkụnke isiokwu a、anyịga-eche naịna-achọnaịleleoziịntanetịgị。 Nke apụtaranaịga-enwe njikwa zuru oke na oziịntanetịgị、site naịmepụtaadreesịnaịmepụtaotu esi ejikwa ha gaa ebe ha na-echekwa.
Mgbe eziteregịozi emailọnwerenkọwadịiche ichegụnyereadresịemailgị。 Dabere na adresahụ、na-eziga letaahụna ebe nchekwa edoziri ka ga gaa。 Ozugboọruru ebeahụịnwere ike imeghe magụọya n’ogeọbụlaịchọrọ.
Ọbụrụnaịzụrụngwugwuọbụlaweebụ、ọna-abụkarịkaọrụntanetịemaildịn’ime ngwugwuweebụgị。 Ọbụrụnaịnweghịmgbeahụgaga-achọịchọnchịkọtanchịkọtaemail iji jiri ngalaba omenala maka emailgị.
Adreesịozi-e omenala ga-ele anyadịka nke a：
Gịnịmere ga ga-ejichọọメールメール?
Mgbe m na-eji okwuazụmahịaazụmahịaezite ihe m na-ekwu n’ezie na-eji omenala ngalaba maka oziịntanetịgị。 Enwereọtụtụihe mereịga-eji mee nke a site n’akaọkachamarana nchekwa data。 Ụdịazụmahịa、ego anaghịakwụụgwọ、uru ana-akwụkarịrịnnọọụgwọndịahụ.
Iji a omenala ngalaba ga-ekwe kagịahịamarakpọmkwemonye ha na-emeso。 N’ihi na ngalaba ana-achịkwamana-achịkwagị、ọga-esiri onyeọbụlaikeịkọwaonwe yadịkaụlọọrụgị.
Kaanyịtụleeiheabụọọhụụebe otuụlọọrụna-eji oziịntanetịazụahịamgbe onye nkeọzọjiriọrụemail n’efu;
N’ihe banyereỤlọọrụA、onyeọbụlanwere ikeịdenyeaha makaadreesịozi-eọbụrụhaalanaọkadị.
ỤlọọrụBụlọọrụemailga-adịiche nyegị、onye nweụlọ。 AhaụlọọrụB nkeụlọọrụBna-egosipụtakwaọrụọkachamarana nraranye nyeazụmahịaya nkeụlọọrụahụnwere.
Site naịchọtaoziịntanetịnkegị、ịna-enwe njikwa zuru oke maka otu esi eziga ozi gi na ezigaragị。 Dịkaọmụmaatụ、ọbụrụnaịnọnaazụmahịaebe e nwereụfọdụụkpụrụdịka data localization、ịnwere ikeịchekwaoziịntanetịgịna sava na ebeụfọdụ.
Ndịahịataa na-ekwusi okwu ikeサイトnaメール。 Oyikarịrịkaụfọdụn’ime oziịntanetịga-agụnyeozidịmkpadịkaịgbaụgwọ、ịnyeakwụkwọ、nkwekọrịtana ihendịyiri ya。 Site n’iji ozinchọtanke onwe gi、ịga-enwe ikeịkwadoọnọdụndịga-esi na nsogbu email.
Ozi email maọbụnke mebiri emebi nwere ikeimetụtaazụmahịagịna nkwado nkena-abịanaụlọahịaemailazụmahịanwere ikeịbauru.
Ọtụtụn’imeàgwàndịezigboụlọọrụweebụnwerekwesịkwaraịnọna ezigbo nnabataメール。 N’imeàgwàndịa、elu nkendepụtagịkwesịrịịdaberena mgbanwe。 Ihendịọzọgụnyere：
Dịkaazụmahịa、ndịahịagịkwesịrịinwe okwukwe na iguzosi ike n’ezi ihe nkeazụmahịagị。ハ・ナ・エニェフェ・グ・オジ・ンゾゾ、ドカ・アハ、アドリーズ・オ・ジ・エ・ナ・イケウェ・バナ・データ・ンチャカタ・エゴ。 Ịdebeメールgịdịmkpa、ịga-elepụanya maka njirimarandịdịkanchekwaデータ、mgbochiマルウェア、mgbochiスパムna ihendịdịka onyena-akpọメール.
Anyịna-enyocha emailanyịsite na nyiwedịiche iche naọnwere ikeịdịmfe ichefu na nkeọbụlan’ime ha nwere ikeịchọnhazidịiche iche。 Mgbeịna-achọonye na-eweta nnabata email、hụnaịnwere ohereịnwetawebmail、POP na IMAP.
ウェブメールna-enyegịohere iji onye na-ewetaozi-weebụnke na-adaba adaba。 IMAP na-enyegịohereịgụozi emailgịsite nangwaọrụọbụlan’enweghịibudata ha。 POP n’aka nkeọzọchọrọka ibudata oziịntanetịgịtupuịgụọha.
InweadreesịIPgịブラックリストbụụzọdoro anyaịga-ahụọrụazụmahịagị（karịsịandịahịa！）gwuo ya ngwa ngwa。 Nke a nwere ikeịbụnsogbudịmkpadịkaotu IPgịna-achọpụtanaọna-ewe oge namgbalịiji mee kaọdịọchaọzọ。 Zerendịọrụozi emailndịnwere ahaọmamaka inwetandịahịanandịna-eto eto kaịga-ejedebe na IP nke ana-emegharịmana-adịna blacklist.
Ịnwere ikeịleleọkwanchịkọtaozi nkeụlọọrụemail jiri Mboxbox MX.
バンドルされたメールホスティングbụmgbeịnwetarantanetịメールna-abịayana（ya okwuahụbụ ‘bundled’）akaụntụweebụweebụgị。 Dabere na mkpagị、nke a nwere ikeịbaurudịukwuu ebeọbụnaịgaghịmkpa ijikwa oziịntanetịnaakaụntụdịiche maọbụkwụọụgwọmakanchịkọtaemail.
Otúọdị、ana-ejikarịịchọtaịchọtae-mail eme ihe na ohere site namkpokọtaikike nkeakaụntụntanetịweebụgị。 Otutu ngwunye na-ekenye otu ohere nke na-eketa n’etiti email gi na ntanetakota。 Ewezụgana ohere、ịna-eketakwa ego nke bandwit ekenye naakaụntụgị.
ọghọm – にじらなちんちくわ。 Ọbụghịmaka nnukwuụlọọrụ.
うる – Mfe iji setup、njirimaraatụmatụ、nnabataọtụtụobereakaụntụemail na otuọnụahịa.
Ọrụnchọtaozi-e kacha mma? Ọbụghịụlọọrụntanetịimeweebụna-enyeatụmatụraara onwe ha nye maka ozi-e、madịkaọmụmaatụ、enwere ikeịchọtaiheatụzuru oke nke ezigboọrụịchọtaraozi-ya nawe rawe.
Endore na-enyeọrụdịkaGoogle na Microsoftndịnwerenchịkwanchịkọtaemaildịka G Suite na Microsoft 365 Business。 Ndịabụọrụemail raara onwe ha nyebụndịdịmfe iji madịike kamaọdịmkpa ka ejikwa harụọụrụiche iche site na Bochumọbụlagodina ha nwere ike iji aha ngalaba omenalagị.
Ihedịna nke abụnaọrụahụnwere ikeịkwụsịụgwọdịokeụnụkaụdaọrụgịna-abawanye。 Dịkaọmụmaatụ、G Suite nwere ikeịnweta$ 5.40naanịmakaatụmatụatụmatụ、mana nkeahụbụụgwọịkwụụgwọonyeọbụlakwaọnwa.
ọghọm – Ọrụnlekọtaọzọ。自我-自我ọzọiji nwetaakaụntụメール.
InterServer dabere na New Jersey manọrọebe a ruo iriafọabụọugbu a-ọdịogologo oge maka onyentanetịweebụ。 Akpa webatadịka onye na-ereahịanaakaụntụBochum nkeọmaugbu a na-ekpuchi ihe niile nke web hosting service spectrum.
Ọbụnadịn’etitindịnnabata webna-akwụụgwọmmefu ego、NameCheapna-abịadịkaọnụala（enweghịpun zubere）。 Site naatụmatụBochumna-ekerịtanke na-amalitedịka $ 1.44、ọbụlagodimaka mmeliteọhụrụha na-anya isiụfọdụọnụahịakachasịala naụlọọrụ。 EwezụgaBochum、AhaCheap na-enyekwangwaahịandịọzọdịkangalaba aha naọrụnchekwa.
WezụgaatụmatụọnụahịaStarter hadịọnụala、Namecheap nwereọrụdịiche ichegụnyerendịọbịaemail nke onwe。サイトntakịrịdịka $ 0.99 / moịnwere ike nwetaọbụghịnaanịnnabata email kamakwaụfọdụohere maka nchekwafaịlụ。 Ọnụahịana-arịelu dabere naọtụtụigbeakwụkwọoziịchọrọ.
Hostinger dabeere na Kaunas、リトアニアma na-enyeọtụtụatụmatụnhazi。 Ihe kacha mma gbasara web hosting habụnaọna-abịana bundled email hosting yana。 N’agbanyeghịmaọbụrụnaịdebanye aha maka ha na-akwado BochumatụmatụmaọbụọbụnaVPS Bochum、ha nwetaragịemail-echebe kpuchie.
Dabere na ma Los Angeles California、InMotion Bochumanọwogburugburu maka ihekarịrịafọ15.Ụlọọrụahụabụwootu n’imendịọrụanyịnweremmasịmakaọtụtụihe naọbụlagodiha web hostingna-arafịnajiara naka.
Site nandekọọrụafọiri n’okpuru eriri ya、TMDhostingabụwoonyemmekọntụkwasịobi makaọtụtụndịnwe ebenrụọrụweebụkemgbeọtụtụafọ。 O nwere otutu ebe datagbakọtarana US gbakwunyere na Netherlands。 Site naọnụahịamalitere site na aladịka $ 2.95 kwaọnwa、nhọrọabụn’ezie oke maka nnukwu maọbụrụnaịna-atụlehana-ejikọozi email naatụmatụBochum ha.
Anyịna-atụleA2 Bochumdịka otu n’imeụlọọrụweebụkachasịelu na ya nwere mgbasa oziọmanke ebe nchekwa data gburugburuụwa-na Amsterdam、Singapore、Arizona na、n’ezie、Michigan。 Ọna-enye usoro ihedịoke egwu majikọtaya na na nnukwuahụmịheahịanaọnụahịaego bara uru.
Ndepụtazuru ezu nkendịna-enyeọrụnchịkọtaanyịnyochaa
Nduzi：Olee oge iji gbanwee gaa VPS
Nnyocha：Ego ole kaịga-akwụmakantanetịweebụ
Ọrụkachasịmma maka obereụlọọrụ
Maka onye ọrụ ahụ, na-ejikọkarị 이메일 na ndị isi dị mkpa dịka Google ma
Maka onye ọrụ ahụ, e-mail e-najikọkar n na ndị isi dị mkpa dịka Google
Maka onye ọrụ ahụ, en na-ejikọkarị e-post na ndị isi dị mkpa dịka Google
Maka onye ụrụ ahụ, um e-mail enviado para ni isi d mkpa d maka